Okwu - Translator Nigeria News
Nabata na Akwụkwọ Akụkọ Nigeria, akụkọ, ozi na nkwukọrịta ozi dị na Internetntanetị World Wide yana site na ụzọ dijitalụ ndị ọzọ, dị ka ngwa ekwentị.
Usoro na ọnọdụ ọrụ a ("nkwekọrịta" a) na-achịkwa iji ngwaahịa na ọrụ dijitalụ niile sitere n'aka Onye Ntụgharị, yana ụfọdụ oge, mbipụta mbipụta nke akwụkwọ akụkọ Onye Ntụgharị, belụsọ na usoro na ọnọdụ ndị ọzọ na-egosi n'ụzọ doro anya. Ọmụmaatụ nke ụdị ngwa ahịa na ọrụ dijitalụ gụnyere 'Translator.ng'. A na-enye ngwaahịa na ọrụ ndị a ozugbo site n'aka Onye Ntụgharị Naịjirịa ma ọ bụ site na nyiwe na ngwaọrụ ndị ọzọ dị iche iche (wdg., Mkpanaka na mbadamba).
Nyochagharị na usoro na ọnọdụ
Anyị nwere ike ịgbanwe usoro nke Agreement a n'oge ọ bụla site na ịgwa gị mgbanwe nke ederede na ederede ma ọ bụ kọmputa (gụnyere enweghị mmachi, site na email ma ọ bụ site na ịdebanye ọkwa na Ọrụ ahụ na "emelitere" ma ọ bụ okwu ndị yiri ya). Mgbanwe ndị ahụ ga-egosikwa na akwụkwọ a, nke ị nwere ike ịnweta n'oge ọ bụla site na ịga na usoro njikọ na ọnọdụ enyere na ọrụ ndị ahụ. Site na iji Ọrụ mgbe emechara mgbanwe na Agreement a ị gosiputara na ị kwenyere na mgbanwe ndị a ga-eme gị.
EGO & AYLỌ
Ga-abụrịrị afọ 18 ma ọ bụ karịa zụọ iji kpọsaa na Akwụkwọ Akụkọ Translator ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ ọ bụla nke Ọrụ anyị na-enye maka ego. Ọ bụrụ na i rughị afọ 18 ma chọọ ị zụrụ ụdị ihe a, biko jụọ nne ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ onye nlekọta gị ka ha mezue nzụta ahụ n’aha gị. Agree kwenyere ịkwụ ụgwọ ndenye aha na ụgwọ ọ bụla ọzọ metụtara na akaụntụ gị maka Ọrụ (gụnyere ụtụ isi ọ bụla) na ọnụego dị ike mgbe ebidoro ebubo ahụ. Ọ bụrụ na ndenye aha gị gụnyere ohere ịnweta mpaghara nwere ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ adịchaghị, ohere ị ga-enweta n'ụdị ebe a nwere ike ịdabere na ụgwọ ọzọ, usoro na ọnọdụ, nke a ga-ekpughere iche iche n'akụkụ ndị a. Ọ gwụla ma ị kwụrụ ụgwọ site na ndenye ego ma ọ bụ nyefe na ntanetị, anyị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ niile na-akpaghị aka na kaadị akwụmụgwọ gị / kaadị akwụmụgwọ. A ga-akwụ ụgwọ ndebanye aha na mbido ndenye aha gị na mmelite ọ bụla. Dịka okwu izugbe, anaghị akwụghachi ụgwọ na ụgwọ niile. Anyị nwere ikike inye nkwụghachi ma ọ bụ kredit naanị n'uche anyị. Ọ bụrụ na anyị weghachite nkwụghachi ma ọ bụ kredit, anyị enweghị ụgwọ ọ bụla ịnye otu nkwụghachi ụgwọ ma ọ bụ yiri ya n'ọdịnihu. Anyị nwere ike ịgbanwe ụgwọ na ụgwọ wee pụta, ma ọ bụ tinye ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ ọhụrụ, site na ịnye gị ọkwa n'ọdịnihu yana ohere ịkagbu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ imelite nkọwapụta kaadị akwụmụgwọ gị / kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ na ịchọrọ iji kaadị akwụmụgwọ / kaadị dị iche, biko kpọtụrụ ndị isi anyị na-ahụ maka mgbasa ozi dijitalụ na https://translator.ng/advert-rates/ iji mee mgbanwe. Ọ bụrụ na ị kwenyere na mmadụ ejirila aha njirimara na paswọọdụ gị nweta Ọrụ na-enweghị ikike gị, biko gwa anyị ozugbo site na ịkpọtụrụ anyị site n'aka ndị isi mgbasa ozi dijitalụ ọ bụla na https://translator.ng/advert-rates/. Na ahụta maka ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla metụtara iji nweta Ọrụ site n'aka ndị na-eweta nweta Internetntanetị ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ nke atọ.
Mgbapụta & Mkpochapu
4.1 Mmeghari ohuru
Ọ gwụla ma akọwapụtara ọ bụla Ndenye aha ma ọ bụ nkwalite ọ bụla mgbe ị na-etinye iwu Ndenye aha anyị, ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ ịkwụ ụgwọ akpaaka, gụnyere ịkwụ ụgwọ ozugbo, ị kwenyere na na njedebe nke oge ndenye aha mbụ (na nke oge ọhụụ ọ bụla mgbe nke ahụ gasịrị) ), Ndenye aha gị ga-emegharị n'otu oge maka otu oge ndenye aha na ọnụego mmeghari ohuru nke enwere ike gbanwee site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na ị họrọghị nhọrọ ịkwụ ụgwọ-akpaaka, anyị ga-akpọtụrụ gị na njedebe nke oge ndenye aha mbụ yana onyinye iji mee ka ndenye aha gị dị ọhụrụ na ọnụego mmeghari ohuru a, nke enwere ike gbanwee site n'oge ruo n'oge. Maka ndenye aha kwa afọ, anyị ga-agwa gị nke mmeghari ohuru nke ndenye aha gị ọbụlagodi ụbọchị 30 tupu ụbọchị ndenye aha gị na-emegharị, belụsọ dị ka iwu chọrọ. Maka ndenye aha niile, ị ga-ehichapụ ndenye aha gị tupu ọ megharịa iji zere ịgba ụgwọ nke ndebanye aha maka oge mmeghari ohuru na kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ site na ego.
O DCGH CAN AKOLKỌ ND CAN ỌR FOR MGBE AKW FORKWỌ AKWUKWỌ. Oge mbata nke ntinye (S) NA AKA AKW DEKWỌ NA-AH RGH AND ANDB RR AND NA-AH NGH AND CANB CANR.. I KWES ANR OB IJI KWES UNR OB KWES TOR TO KWESUERUE KWESUER FOR YOURB YOURR D FORBUERUE FORLỌ
4.2.1 Nwepu iwu maka ndenye aha ndị ọzọ
Anyị nwere ike ịkagbu na ndenye aha gị n'oge ọ bụla na ọkwa gị. You nwere ike ịkagbu na ndenye aha gị tupu oge ọhụrụ ọ bụla site na ịkpọtụrụ anyị site na nke ọ bụla n'ime ndị ọrụ mgbasa ozi dijitalụ anyị na https://translator.ng/advert-rates/
B OFR OF SLỌ Ọrụ site na RLỌ ỌZỌ
5.1 Servicesgwọ Ọrụ Ndị Ọzọ nke Atọ
Ọ bụrụ na ịnweta Ọrụ site na ngwa mkpanaka ma ọ bụ ụdị ọzọ nke ikpo okwu ndị ọzọ, nkwekọrịta nkwekọrịta ikike onye ọrụ ngwụcha maka ọrụ mkpanaka nke ibudatara na ngwa mkpanaka nwere ike itinye na mgbakwunye na usoro nke Agreement a ma kwenye na ị bụ n'okpuru ụdị ngwa ma ọ bụ nyiwe dị na mgbakwunye na nkwekọrịta a.
5.2 Site n’oge ruo n’oge, anyị nwere ike iji ndị ọzọ nke anaghị esonyere anyị iji hazie ịkwụ ụgwọ maka Ọrụ (“Onye Nhazi nke Atọ”). Agree kwenyere na Onye Nhazi nke Atọ a bụ naanị ọrụ maka ịchịkwa, njikwa, nhazi, ma ọ bụ mezuo ịzụta nke esitere na sistemụ ya. Mgbe ị na-eji usoro nhazi nke atọ a, ị nwere ike ịdabere na usoro ojiji / ọrụ na iwu nzuzo (nke) nke Usoro nke Ndị Ọzọ.
IHE NA-AKW ONS ON EGO
6.1 Akụ ọgụgụ isi
Ọdịnaya na imewe nke saịtị ahụ, Ngwa Digital ọ bụla na ihe ọ bụla e-zigara gị ma ọ bụ nye gị ya na njikọ nke saịtị na / ma ọ bụ Ngwa Digital (ụdị ọdịnaya ahụ, imewe, mgbasa ozi na ihe ndị a na-akpọ dị ka " Ọdịnaya Nsụgharị ”), bụ nwebisiinka nke Onye Ntụgharị na ndị nyere ya ikikere, ọ bụrụ na ọ dị. Nweghị ike iji ma ọ bụ mụta nwa ma ọ bụ kwe ka onye ọ bụla jiri ma ọ bụ mepụtaghachi akara ọ bụla maka azụmaahịa ọ bụla na-enweghị ikike edere ede na 'Onye Ntụgharị'. Sọftụwia na-arụ ọrụ na Saịtị na Ngwa Digital niile bụ sọftụwia nwere nke ị nwere ike iji ya belụsọ ma ekwupụta ya n'okpuru Usoro ndị a. Inwere ike inomi, nweghari engineer, gbanwee ma obu uzo ozo ngwanro.
6.2 Naanị otu onye nwere ike ịnweta otu Ọrụ n'otu oge site na iji otu aha njirimara ma ọ bụ paswọọdụ, belụsọ na anyị kwenyere na uzọ ọzọ.
6.3 Ọ bụ ezie na ịnwere ike ibudata ma chekwaa isiokwu site na Ọrụ maka ọdịmma gị, ị nwere ike ị gaghị enye ndị ọzọ ohere ịnweta ụdị isiokwu ahụ. Ihe ndị edere n’elu emetụtaghị ọrụ nkekọrịta ọ bụla anyị nyere site na Ọrụ ahụ na-enye gị ohere ịkekọrịta isiokwu ma ọ bụ njikọ nke isiokwu n’etiti ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ịnwere ike iji isiokwu ị ibudatara maka ojiji nkeonwe iji zụlite ma ọ bụ rụọ ọrụ azụmaahịa akpaghị aka ma ọ bụ maka data ma ọ bụ ederede ederede.
6.4 Mmachi ndị ọzọ na ojiji nke ọdịnaya.
6.4.1 I kwenyere na ị ghara imegharị ma ọ bụ gbanwee ọdịnaya dị site na Ọrụ. I kwenyere ka ị ghara igosipụta, biputere, etiti, ma ọ bụ wepụ ọdịnaya maka ojiji na weebụsaịtị ọzọ, ngwa, blog, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, belụsọ na ekwuputaghị na nkwekọrịta a. I kwenyere na ị gaghị ekepụta ọrụ ọ bụla sitere na ma ọ bụ nwere ọdịnaya dị site na Ọrụ. Ntucha ma ọ bụ ịchacha nke ma ọ bụ na ntanetị na-ejikọ na Ọrụ ma ọ bụ Ọdịnaya ọ bụla dị na ya na / ma ọ bụ ojiji nke WebCrawler, spidering ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ akpaghị aka iji nweta, idetuo, ndeksi, usoro na / ma ọ bụ chekwaa ọdịnaya ọ bụla emere na ma ọ bụ site na A machibidoro ọrụ ndị ọzọ karịa nke anyị nyere ikikere.
6.4.2 Further kwenyere na ị ga-agbaso usoro nkwekọrịta (dịka, Robots.txt, Protocol Access Content Access Protocol (ACAP), wdg) enwere ike iji ya na Ọrụ. Nwere ike ịnweta akụkụ nke Ọrụ ndị enyereghị gị ikike na ya, ma ọ bụ nwaa igbochi mmachi ọ bụla etinyere n'iji ma ọ bụ nnweta nke Ọrụ ndị ahụ.
6.4.3 Dị ka iwu n'ozuzu, ị gaghị eji Ọdịnaya, gụnyere na-enweghị njedebe, ọdịnaya ọ bụla emere site na otu n'ime faili RSS anyị, na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ azụmahịa ọ bụla, na-enweghị nkwenye ederede anyị edepụtara.
6.4.4 You nwere ike ịmepụta ngwa, ndọtị, ma ọ bụ ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ na-eji Ọdịnaya anyị na-enweghị ikike anyị. Nwere ike iwekọta ma ọ bụ jiri ọdịnaya anyị rụọ ọrụ n'ụzọ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye dochie anya ndenye aha na Ọrụ.
6.4.5 Iji ihe ọ bụla na-akwadoghị ma ọ bụ machibido ọ bụla nwere ike ịdabere na gị gbasara iwu obodo, ikpe ikpe mpụ, ma ọ bụ ha abụọ, n'okpuru gọọmentị etiti, steeti, iwu mpaghara, ma ọ bụ iwu ndị si mba ọzọ, iwu, ụkpụrụ na nkwekọrịta. Anyị na-achọ ka ndị ọrụ kwanyere ikike nwebisiinka anyị, ụghalaahịa, na ikike ikike ọgụgụ isi ndị ọzọ ma na-achịkwa otu ihe ahụ.
6.4.6 Gaghị abanye ma ọ bụ lelee Ọrụ ndị ahụ site na iji edemede ọ bụla, ndọtị, ma ọ bụ mmemme ọ bụla nke gbanwere ụzọ Ọrụ ndị ahụ gosipụtara, sụgharịrị, ma ọ bụ bufee gị ya na enweghị nkwenye ederede anyị.
6.4.7 Agree kwenyere na ị gaghị eji Ọrụ ndị ahụ maka nzube ọ bụla na-akwadoghị. Anyị nwere ikike ịkwụsị ma ọ bụ gbochie gị ịnweta Ọrụ ma ọ bụrụ na, n'echiche anyị, ojiji nke Ọrụ ahụ nwere ike imebi iwu ọ bụla, ụkpụrụ ma ọ bụ mkpebi, na-emebi ikike onye ọzọ ma ọ bụ mebie usoro nke nkwekọrịta a.
ONYE ỌH GREN N'ANYA
7.1 Aha njirimara & Paswọdu.
Anyị nwere ike ịchọ ka ị debanye aha iji nweta ma jiri ụfọdụ mpaghara anyị. Anyị na-akwado ka ị jiri aha nke mbụ na aha ikpeazụ dịka aha njirimara gị maka mpaghara ndị a. Ewezuga ụfọdụ, mgbe ị denyere aha maka mpaghara ndị a, anyị ga-eji aha gị mejupụta aha njirimara gị. Ọ bụ ọrụ gị ịhọrọ paswọọdụ gị n'ụzọ amamihe ma hụ na nchekwa nke paswọọdụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu ma ọ bụ kwenyere na mmadụ na-eji paswọọdụ gị na-enweghị ikike gị, biko kpọtụrụ onye ọ bụla n'ime ndị isi mgbasa ozi dijitalụ anyị na https://translator.ng/advert-rates/. Anyị nwere ikike igosipụta ozi ọ bụla gbasara gị, gụnyere data ndebanye, iji, n'etiti ihe ndị ọzọ, rube isi na iwu na / ma ọ bụ arịrịọ ọ bụla n'okpuru usoro iwu, kpuchido ihe onwunwe anyị ma ọ bụ ikike anyị, ma chekwaa ọdịmma nke ndị ọzọ, dịka gosiputara nke oma na amụma nzuzo anyị.
7.2 Ọdịnaya Emepụtara Onye Ọrụ.
7.2.1 Ọdịnaya Onye Ọrụ.
Anyị na-enye gị ohere ịza ajụjụ na itinye aka na mkparịta ụka gbasara Ọdịnaya anyị. Ọ bụla ọdịnaya, ozi, ndịna-emeputa, ọdịyo, oyiyi, na njikọ ị nyefere dị ka akụkụ nke ịmepụta profaịlụ gị ma ọ bụ na njikọ nke ọ bụla n'ime ọrụ ndị a na-ezo aka na ya "Ọdịnaya Onye Ọrụ" na nkwekọrịta a ma dabere na usoro na ọnọdụ dị iche iche setịpụrụ n'okpuru.
7.2.2 autdọ aka ná ntị Banyere Ndị Ọrụ Ndị Ọzọ na Ọdịnaya Ndị Ọrụ
Ghọtara ma kwenye na Ọdịnaya Onye Ọrụ gụnyere ozi, echiche, echiche, na nkwanye nke ọtụtụ ndị mmadụ n'otu n'otu na otu dị iche iche wee mebe iji nyere gị aka ịnakọta ozi ịchọrọ iji nyere gị aka ime mkpebi nke gị. N'ụzọ dị oke mkpa, ị ga-ahụ maka mkpebi itinye ego gị na iji nyochaa ma nyochaa ozi ọ bụla ịchọrọ ịtụkwasị obi. Anyị anaghị akwado ndụmọdụ ma ọ bụ echiche ọ bụla nke onye ọrụ ọ bụla nyere. Anyị anaghị enyocha, dezie, ma ọ bụ nyochaa Ọdịnaya Onye Ọrụ. Agbanyeghị, anyị debere ikike iji nyochaa ma ọ bụ wepu ọdịnaya Onye ọrụ ọ bụla na Ọrụ ndị ahụ n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. I kwesiri ịmara na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike iji Ọrụ anyị maka uru onwe ha. N'ihi nke a, biko gakwuru ndị ozi jiri obi abụọ dabara adaba. Ọdịnaya onye ọrụ nwere ike iduhie, aghụghọ, ma ọ bụ na njehie.
7.2.3 Inye ikike na ikike ịnọchite anya gị.
Ọ bụrụ n ’bulite, zipu ma ọ bụ nyefee Ọdịnaya Onye Ọrụ ọ bụla na Ọrụ, ị na-anọchite anya anyị na ịnwere ikike iwu niile dị mkpa iji bulite, biputere ma ọ bụ nyefee ọdịnaya Onye ọrụ a yana ọ gaghị emebi iwu ọ bụla ma ọ bụ ikike nke mmadụ ọ bụla. Agree kwenyere na na ị bulite, zipụ ma ọ bụ nyefee ozi na Ọrụ ndị ahụ, ị ​​na-enye onye ntụgharị okwu, yana ndị mmekọ anyị na ndị nọchiri anyị na-abụghị naanị, na-ebufe ya, zuru ụwa ọnụ, na-akwụ ụgwọ zuru oke, enweghị ego, na-adịgide adịgide, enweghị ike ịgbanwe, ikike ikike na ikikere iji, kesaa, mee n'ihu ọha, gosipụta, ịsụgharị, gbanwee mmepụtakwa, yana mepụta ọrụ ndị ọzọ sitere na ọdịnaya Onye ọrụ gị na mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ teknụzụ ọ bụla, nke amarala ugbu a ma ọ bụ mechaa, n'ụzọ ọ bụla, n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ, yana ma ọ bụ na-enweghị njirimara, na-enweghị ọrụ ọ bụla iji kwụọ gị ụgwọ.
Wa napụrụ iwu niile ị nwere ike ịnwe na ọdịnaya Onye ọrụ ọ bụla. Agree kwenyere na anyị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ gbanwee ọdịnaya Onye ọrụ gị n’achọghị ịnwe ikike ọzọ n’aka gị. I nyekwara anyị ikike iji ikike nke ọdịnaya Onye ọrụ, ma ọ bụ akụkụ ọ bụla ya, site na ndị debanyere aha na ndị ọrụ ndị ọzọ dabere na usoro na ọnọdụ nke nkwekọrịta a, gụnyere ikike iji gosipụta ọdịnaya Onye ọrụ gị kpọmkwem na Ọrụ yana iji nye ohere ndị ọzọ debanyere aha ma ọ bụ ndị ọrụ iji rịọ ịnweta ọdịnaya Onye ọrụ gị, dịka ọmụmaatụ site na ndepụta RSS. Kwenyere na ị bụ maka ego maka nkwupụta ọ bụla megide anyị na-esite na ọdịnaya Ọdịnaya ọ bụla ị mepụtara.
7.2.4 Anyị nwekwara ike iwepu Ọdịnaya Onye Ọrụ ọ bụla maka ebumnuche ọ bụla yana na enyeghị gị ọkwa. Nke a gụnyere ihe niile metụtara ojiji nke Ọrụ ma ọ bụ ndị otu gị, gụnyere akaụntụ email, ọkwa, profaịlụ ma ọ bụ ozi nkeonwe ndị ọzọ ị mepụtara mgbe ị na Ọrụ ndị ahụ.
Ndị ọrụ niile ga-asọpụrụ iwu ọ bụla nke Onye Ntụgharị zitere na Forum. Gaghị:
Ziga, jikọọ ma ọ bụ bipụta ozi ọ bụla nwere ihe rụrụ arụ, ịkpa ókè agbụrụ, ndina nwoke ma ọ bụ nwoke na nwanyị ma ọ bụ nke nwere ụdị okwu ịkpọasị ọ bụla;
Ziga, jikọọ ma ọ bụ bipụta ozi ọ bụla megidere ikike nwebisiinka;
Ziga, jikọọ ma ọ bụ bipụta ozi ọ bụla nke iwu na-akwadoghị, nke obi ọjọọ, na-ekwutọ ma ọ bụ nwere ike ịkpa oke usoro iwu na-aga n'ihu ma ọ bụ na-emebi iwu ụlọ ikpe ma ọ bụ usoro ọzọ;
Ziga, jikọọ ma ọ bụ bipụta ozi ọ bụla na-akparị mmadụ, na-eyi egwu ma ọ bụ na-eme mwakpo onwe gị na onye ọrụ ọzọ ma ọ bụ onye ọrụ ntụgharị;
Ziga otu Ozi ahụ, ma ọ bụ Ozi yiri ya, ugboro ugboro;
Ziga ma ọ bụ bipụta ozi ọ bụla na-enweghị njikọ na Forum ma ọ bụ isiokwu Forum;
Ziga, jikọọ ma ọ bụ bipụta ozi ọ bụla nwere ụdị mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ nkwalite maka ngwaahịa na ọrụ ma ọ bụ ozi ọ bụla nwere ozi ma ọ bụ “spam”;
Zipu, jikọọ ma ọ bụ bipụta ozi ọ bụla na nkwanye iji zụta ma ọ bụ izere ịzụta otu nchekwa ma ọ bụ nke nwere ozi nzuzo nke ndị ọzọ ma ọ bụ nke nwere nzube nke na-emetụta ọnụahịa ma ọ bụ uru nke nchekwa ọ bụla;
Dochie mmalite nke Ozi ọ bụla;
Ersonme ka mmadụ ma ọ bụ ihe ọ bụla (gụnyere ndị ọrụ ntụgharị Ntụgharị ma ọ bụ ndị ọbịa ma ọ bụ ndị ọbịa) ma ọ bụ kwuo ụdị mmekọ ọ bụla na mmadụ ma ọ bụ ihe ọ bụla;
Ziga ma ọ bụ bufee ozi ọ bụla nwere nje virus, faịlụ ma ọ bụ koodu ezubere iji kwụsị, bibie ma ọ bụ belata arụmọrụ nke saịtị ma ọ bụ ngwanrọ kọmputa ma ọ bụ akụrụngwa ọ bụla, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-emerụ ahụ;
Na-anakọta ma ọ bụ chekwaa data nke ndị ọrụ ndị ọzọ; na / ma ọ bụ
Machibido ma ọ bụ gbochie ọ bụla ọzọ ọrụ site na iji Forums.
Site na ịdebe Ozi na Nzukọ ọ bụla ị kwenyere ịkwụ ụgwọ na ijide Onye Ntụgharị na-adịghị njọ site na nkwupụta niile, ụgwọ na mmefu (gụnyere mmefu iwu) nke sitere na Ozi ọ bụla edepụtara ma ọ bụ bipụtara nke mebiri ngalaba a.
IWU ỌBOPR;; Digital Millennium Copyright Act (“DMCA“)
Onye ntụgharị okwu na-asọpụrụ ikike nwebisiinka nke ndị ọzọ ma na-atụ anya ka ndị ọrụ ya mee otu ihe ahụ. Dabere na Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), enwere ike ịchọta ederede ya na saịtị US Office Office na www.copyright.gov/legislation/pl105-304.pdf, Onye ntụgharị okwu ga-eme ọsọ ọsọ gbasara ọkwa nke ngabiga ngabiga nwebiisinka a na-ekpesara anyị nke ọma. Anyị ga-gbanyụọ na / ma ọ bụ kwụsị akaụntụ nke ndị ọrụ na-emegharị iwu.
Ọ bụrụ na ị kwenyere na Onye Ntụgharị ma ọ bụ onye ọ bụla na-eji Ihe Ntụgharị emebiela ikike nwebisiinka gị, biko gwa anyị site na email anyị na admin@translator.ng.
AKWBKWỌ AKWYKWỌ AKW WEKWỌ AKW THKWỌ UKWU, Ọrụ NA SOFTWARE
Iji ojiji nke weebụsaịtị ọ bụla nke atọ, ọdịnaya, data, ozi, ngwa, ngwa, ọrụ ma ọ bụ akụrụngwa (mkpokọta, "Ọrụ Ndị Nke Atọ") anaghị abụ nnabata, ma ọ bụ na ọ wetara ọrụ ọ bụla, ibu ọrụ ma ọ bụ ụgwọ anyị. ma ọ bụ nke ndị mmekọ anyị. Anyị anaghị enyocha, kwado, ma ọ bụ nwee ibu ọrụ ọ bụla maka Ọrụ Ndị Ọzọ na omume azụmaahịa ọ bụla nke atọ (gụnyere, na-enweghị mmachi, iwu nzuzo ha), ma Ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ akara ngosi anyị na / ma ọ bụ nkwado nkwado dị na Ọrụ Ndị Ọzọ. akụkụ nke nkwekọrịta ma ọ bụ nkwado ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. N'ihi ya, anyị na-agba gị ume ka ị mara mgbe ị na-eji Ọrụ ahụ ma gụọ usoro na ọnọdụ na iwu nzuzo nke ọrụ nke atọ ọ bụla ị na-eji.
Nkwuputa na njedebe nke ikike
Mgbe Onye ntụgharị na-agba mbọ maka izi ezi, ọ naghị enye ikike ma ọ bụ na-ekwe nkwa ido anya ma ọ bụ zuo oke nke ozi ọ bụla ma ọ bụ nchekwa data dị na ọrụ anyị. Onye Nsụgharị anaghị enye ikike ma ọ bụ kwe nkwa na faịlụ ọ bụla dị maka nbudata agaghị enwe ntụpọ. Onweghi onye ntụgharị ma ọ bụ nke onye na enye ya ozi ga-aza ajụjụ n'ụzọ ọ bụla n'aka gị ma ọ bụ ndị ọzọ maka igbu oge, ezighi ezi, mperi ma ọ bụ mmezi na ihe edepụtara na Onye Ntụgharị Asụsụ.
Ọdịnaya, ọrụ, na atụmatụ nke Onye Ntụgharị ga-agbanwe na-enweghị ọkwa. Nsonye nke ọdịnaya, ọrụ na atụmatụ ọ bụla na Onye Ntụgharị n'oge ọ bụla apụtaghị ma ọ bụ nye ikike na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị a ga-adị n'oge ọ bụla.
Ọ bụ ezie na anyị mere usoro ndị ezi uche dị na ha iji hụ na enweghị nje, ikpuru, ịnyịnya Trojan ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emebi ihe dị, ihe egwu niile gbasara ogo na arụmọrụ nke Onye Ntụgharị na izi ezi na izu ezu nke ozi ọ bụla dị gị.
Echiche, ndụmọdụ na ozi ndị ọzọ ekwuputara na ọgbakọ Ntụgharị Asụsụ, ngalaba nkọwa, blọọgụ, na mpaghara ọ bụla ọzọ egosiri Ọdịnaya ewepụtara onye ọrụ, na-anọchi anya echiche nke onye ahụ ma ọ bụchaghị nke ndị ntụgharị asụsụ. Onye ntụgharị okwu anaghị akwado ma ọ nweghị ọrụ maka nkwupụta, ndụmọdụ na echiche onye ọ bụla na-abụghị ndị na-ekwuchitere ndị ntụgharị asụsụ enyere ikike.
Mkpebi itinye ego ọ bụla ma ọ bụ omume ndị ọzọ ndị ọrụ na-eme dabere na ozi dị na Ihe Ntụgharị ma ọ bụ na ngwa mkpanaka ha kwesịrị ibu ụzọ nyochaa onye ndụmọdụ ndụmọdụ ego ma ọ bụ ọkachamara ndị ọzọ. A NA-AHER Ọrụ Ọrụ Ntụgharị Asụsụ Dijitalụ NA “D IS KA” NA “D AV KA Ọ D” ” Anyị anaghị enweta akwụkwọ ikike nke ụdị ọ bụla, ma ọ bụ na-egosipụta ma ọ bụ na-arụ ọrụ, gụnyere na-enweghị mmachi, akwụkwọ ikike nke ahịa ma ọ bụ mma maka otu nzube ma ọ bụ enweghị nkwenye, ma ọ bụ akwụkwọ ikikere banyere ngwaahịa. Na ọrụ (G ANNYERE njikọ ọ bụla ọzọ na saịtị ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ).
12.2. Ịkwụsị ụgwọ
Na odighi ihe gha eme ka Atom Services Limited Limited, ma obu ndi nne na nna ha ma obu ndi ozo ha nwere ya
(i) Mmebi ọ bụla dakwasịrị, nke bara uru, ma ọ bụ na-apụ apụ (gụnyere, mana ọnweghị oke na, mmebi nke ọghọm nke uru azụmaahịa, nkwụsị azụmaahịa, mmefu nke mmemme ma ọ bụ ozi, na ihe ndị yiri ya) na-esite n'iji ma ọ bụ enweghị ike iji Onye ntụgharị asụsụ akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ ozi ma ọ bụ ọrụ ọ bụla enyere na weebụsaịtị Translator ma ọ bụ na nyiwe dijitalụ ndị ọzọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na adụla Onye Ntụgharị aro maka ụdị mbibi a, ma ọ bụ
(ii) Nkwuputa ọ bụla dabara na njehie, enweghị isi, ma ọ bụ mmejọ ndị ọzọ edepụtara na Onye Ntụgharị ma ọ bụ na ngwa ngagharị ya.
Agree kwenyere ịgbachitere, nye ndị ụlọ ọrụ ikike iwepụ, na ijide akwụkwọ akụkọ ndị ntụgharị asịrị na-adịghị emerụ ahụ, Atom Services Limited yana ndị mụrụ ha na ndị mmekọ ha na mmemme ọ bụla na-esite na:
ojiji gị na nnweta nke weebụsaịtị na Ihe Ntụgharị asụsụ ntanetị;
imebi iwu nke Ọrụ ndị a;
mmebi gị nke ikike ọ bụla nke atọ gụnyere ikike nwebisiinka, ụghalaahịa ọ bụla, nzuzo nzuzo, ma ọ bụ ikike nzuzo metụtara Ọdịnaya Onye Ọ bụla nke ị nyefere (ma ọ bụrụ na ọdabara) ma ọ bụ ojiji nke weebụsaịtị.
Nchedo na ụgwọ ọrụ ụgwọ ga-alanarị oge ahụ yana iji ọrụ ịntanetị anyị ọ bụla
Anyị nwere ike ịkwụsị Usoro Ọrụ ndị a, akaụntụ gị, ma ọ bụ ohere ị nwere maka ọrụ ndị Ntụgharị na oge ọ bụla na-enyeghị gị ọkwa.
Nkwekọrịta a dị n'etiti akwụkwọ akụkọ Translator na ndị ọrụ ya ga-achịkwa ma kọwaa ya n'okpuru iwu nke United Kingdom.
Ọ bụrụ na a hụ na ndokwa ọ bụla nke Usoro Ọrụ a megidere iwu, a ga-eweghachi usoro a iji gosipụta ebumnuche mbụ, yana usoro na ọnọdụ ndị ọzọ niile ga-adịgide n'ike na mmetụta.
Onyinye 14.3. Mkpebi esemokwu na mkpezi ikpe
Agree kwenyere na usoro mkpebi esemokwu na-esote maka esemokwu iwu ọ bụla ma ọ bụ nkwupụta iwu na-esite ma ọ bụ metụtara Usoro Ọrụ a, ọrụ ntanetị n'ịntanetị, ndebanye aha ọ bụla nye e-Translator ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke mmekọrịta anyị. N'ịchọ ịchọta mkpebi ọsọ ọsọ na nke kachasị dị mma nke nsogbu anyị, gị na Onye ntụgharị okwu kwenyere na mbụ ị ga-atụle nke ọ bụla na nzuzo site na ọ dịkarịa ala ụbọchị 30. Iji mee nke ahụ, biko zitere gị aha gị na ozi ịkpọtụrụ gị, ihe na-echegbu gị na ụzọ ị chọrọ ị ga-esi zitere anyị ozi elektrọnik na adresị anyị: Y’oburu n’icho ka gi na gi kparita uka, anyi ga-eji gi mee ihe n’edereede gi ma o bu adreesị ozi-e.
Ọ bụrụ na anyị enwetabeghị azịza ekwesiri mgbe anyị nwechara mkparịta ụka maka opekata mpe ụbọchị 30, gị na Onye ntụgharị okwu kwenyere na Mkpesa Iwu ọ bụla nke onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike ịnwe ga-edozi ya site na mkpezi ikpe.
14.3.1 Ewezuga na Mkpebi Ikpe Iwu. Enwere uzo abuo pere mpe na ndozi esemokwu na mkpezi ikpe:
(i) Otu onye obula nwere ike igbaso ulo ikpe pere mpe ihe obula di n’ime ikpe nke ulo ikpe, ma oburu na ikpe ahu n’iru n’otu n’otu;
(ii) Otu onye obula nwere ike ichota mmezu nke ikike ya, ụghalaahịa ya, ikike ya ma obu ihe nzuzo ya na ulo ikpe ma obu obodo etiti.
Iji nyere aka dozie nsogbu ọ bụla dị n'etiti anyị ọsọ ọsọ na ozugbo, gị na Onye ntụgharị, kwenye na ịmalite ịmalite ikpe ọ bụla n'ime otu afọ mgbe Nkwupụta Iwu kwadoro; ma ọbụghị, agbaghaara Iwu Iwu. Express kwuputara ikike ọ bụla ịdekọ ihe gbasara klaasị ma ọ bụ chọọ enyemaka na klaasị. A ga-ekpe ikpe mkpebiri niile na Naịjirịa. Ndị otu a kwenyere na ndokwa a na Mkpebi Esemokwu dị n'okpuru, na a ga-achịkwa ya ma debe ya n'okpuru Iwu Mkpebi ikpe nke United Kingdom.
Ọ dị mkpa ka ị ghọta na mkpebi onye mkpezi ikpe ahụ ga-abụrịrị iwu ma enwere ike ịbanye ya dị ka ikpe n'ụlọ ikpe ọ bụla nwere ikike.
Ọ bụrụ na ndokwa ọ bụla nke Usoro na ọnọdụ ọrụ a ga-ahụta na iwu akwadoghị, ihe na-abaghị uru ma ọ bụ maka ihe ọ bụla enweghị ike ịmanye ya, mgbe ahụ a ga-ahụta onyinye ahụ ka ọ bụrụ nkewapụrụ na Usoro Ọrụ a ma ọ gaghị emetụta ndaba na ịmanye iwu nke usoro ọ bụla fọdụrụnụ.
Ugboro 14.5. Ngosipụta zuru ezu
Usoro na ọnọdụ ọrụ a na-anọchite anya nkwekọrịta zuru oke gbasara isiokwu a n'etiti ndị ọzọ wee dochie nkwekọrịta na nghọta niile dị n'etiti ha na mbụ, ma ederede ma ọ bụ ọnụ.
14.6. Ike ka ike
Ọ dịghị otu onye ga-aza ajụjụ maka ọdịda ọ bụla ịrụ ọrụ ọ bụla (na-abụghị ụgwọ ịkwụ ụgwọ) n'okpuru, ma ọ bụ site na igbu oge ọ bụla n'ịrụ ọrụ ya, n'ihi ihe kpatara ike ya, gụnyere esemokwu ụlọ ọrụ nke ụdị ọ bụla, omume Chineke, onye iro ọha, omume nke gọọmentị, ọdịda nke nkwukọrịta, ọkụ ma ọ bụ ihe ọghọm ndị ọzọ.
10.8. Ndị ọrụ ngo nọọrọ onwe ha
Ndị otu a bụ ndị ọrụ nkwekọrịta onwe ha, yana Usoro Ọrụ a anaghị emepụta mmekọrịta, njikọta ọnụ, ụlọ ọrụ, ikike, onye na-ere ahịa ma ọ bụ mmekọrịta ọrụ n'etiti ndị ọzọ. Have nweghị ikike ịme ma ọ bụ nabata onyinye ọ bụla ma ọ bụ nnọchite anya anyị n'ihi ya, ị gaghị ekwupụta nkwupụta ọ bụla, na saịtị gị (ma ọ bụrụ na ọ bụla) ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, nke megidere Usoro Ọrụ a.